အောင်မြင်ဖို့ အတွက် ဘွဲ့ရစရာမလိုတဲ့ အကြောင်းအရင်း (၇) ချက် -
၁ – ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ အရည်အသွေး
အလုပ် အကိုင်ရရှိမှုဟာ ကျွမ်းကျင်မှု နဲ့ အရည် အသွေးကို မူတည်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းလုပ်မယ်ဆိုရင် လည်း ဒီအချက်တွေပေါ်မှာပဲ မူတည် တာပါ။တက္ကသိုလ်တွေဟာ ပညာရေးအတွက် ကောင်းတဲ့ နေရာတွေ ဖြစ်ပေမဲ့ အလုပ်အကိုင်နဲ့ ပတ်သက်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လေ့ကျင့်ပေးနိုင်တဲ့ နေရာတွေ မဟုတ်ပါဘူး။
၂ – ဘွဲ့မရသူ
ဘွဲ့မရရင် အောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘွဲ့မရဘဲနဲ့လည်း အောင်မြင်မှုကို ရယူနိုင်တယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ စတိဗ်ဂျော့၊ ဟင်နရီဖို့ဒ်၊ စတီဗင်စပီးဘာ့ဂ်ျ စတဲ့သူတွေဟာ တက္ကသိုလ်က ဘွဲ့ရသူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။
၃ – အပြင်ဘဝ
စာသင်ခန်းထဲမှာထက် အပြင်ဘဝက သင့်ကို ပိုသင်ကြား ပေးနိုင်ပါတယ်။ သင်လိုအပ်တာတွေကို ပိုပြင်ဆင် ပေးနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လက်တွေ့ လုပ်ရင်း သင်ယူနိုင်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
၄ – ရွယ်တူတွေထက် သာတယ်
သင်နဲ့ရွယ်တူ တက္ကသိုလ်တက်သူတွေထက် သင်နှစ်သက်ရာ နယ်ပယ်မှာ ပိုရှေ့ရောက်နေပါလိမ့်မယ်။ အဆက်အသွယ် ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။
၅ – ရှိတာနဲ့ လုပ်လို့ရ
ဒီနေ့ခေတ်မှာ ဘွဲ့ရမှ မဟုတ်ဘဲ သင့်မှာ ရှိပြီးသား အဆက်အသွယ်၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ ငွေကြေးနဲ့ သင့်ဘဝကို အောင်မြင်စွာ ထူထောင်လို့ ရနေပါပြီ။ တက္ကသိုလ်မှာ သင်ကြားတဲ့ ပညာရပ်တွေကိုလည်း အပြင်မှာ လေ့လာလို့ ရနေပါပြီ။
၆ – စွန့်ဦးတီထွင်
ဖောက်ထွက်တွေးခေါ် တတ်တာ၊ စွန့် ဦးတီထွင်ချင်တာတွေကို တက္ကသိုလ် က ထိရောက်အောင် သင်ကြား မ ပေးနိုင်ပါဘူး။ ဘောင်တွေ၊ စနစ်တွေထဲက လာတဲ့လူ မဟုတ်တဲ့အတွက် သင့်တွေးခေါ်မှုက ပိုပြီးလက်တွေ့ကျတတ်ပါတယ်။
၇ – အနည်းငယ်သာ အသုံးဝင်
တက္ကသိုလ်မှာ သင်ကြားခဲ့တာတွေကို လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာ အနည်းငယ်ပဲ အသုံးဝင်တာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အောငျမွငျဖို့ အတှကျ ဘှဲ့ရစရာမလိုတဲ့ အကွောငျးအရငျး (၇) ခကျြ
အလုပျ အကိုငျရရှိမှုဟာ ကြှမျးကငျြမှု နဲ့ အရညျ အသှေးကို မူတညျပါတယျ။ ကိုယျပိုငျ လုပျငနျးလုပျမယျဆိုရငျ လညျး ဒီအခကျြတှပေျေါမှာပဲ မူတညျ တာပါ။တက်ကသိုလျတှဟော ပညာရေးအတှကျ ကောငျးတဲ့ နရောတှေ ဖွဈပမေဲ့ အလုပျအကိုငျနဲ့ ပတျသကျရငျတော့ အကောငျးဆုံးဖွဈအောငျ လကေ့ငျြ့ပေးနိုငျတဲ့ နရောတှေ မဟုတျပါဘူး။
ဘှဲ့မရရငျ အောငျမွငျနိုငျတယျလို့ ပွောတာမဟုတျပါဘူး။ ဘှဲ့မရဘဲနဲ့လညျး အောငျမွငျမှုကို ရယူနိုငျတယျလို့ ဆိုလိုတာပါ။ စတိဗျဂြော့၊ ဟငျနရီဖို့ဒျ၊ စတီဗငျစပီးဘာ့ဂျြ စတဲ့သူတှဟော တက်ကသိုလျက ဘှဲ့ရသူတှေ မဟုတျပါဘူး။
စာသငျခနျးထဲမှာထကျ အပွငျဘဝက သငျ့ကို ပိုသငျကွား ပေးနိုငျပါတယျ။ သငျလိုအပျတာတှကေို ပိုပွငျဆငျ ပေးနိုငျပါတယျ။ တကယျလကျတှေ့ လုပျရငျး သငျယူနိုငျတာကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။
သငျနဲ့ရှယျတူ တက်ကသိုလျတကျသူတှထေကျ သငျနှဈသကျရာ နယျပယျမှာ ပိုရှရေ့ောကျနပေါလိမျ့မယျ။ အဆကျအသှယျ ပိုကောငျးပါလိမျ့မယျ။
ဒီနခေ့တျေမှာ ဘှဲ့ရမှ မဟုတျဘဲ သငျ့မှာ ရှိပွီးသား အဆကျအသှယျ၊ ကြှမျးကငျြမှု၊ ငှကွေေးနဲ့ သငျ့ဘဝကို အောငျမွငျစှာ ထူထောငျလို့ ရနပေါပွီ။ တက်ကသိုလျမှာ သငျကွားတဲ့ ပညာရပျတှကေိုလညျး အပွငျမှာ လလေ့ာလို့ ရနပေါပွီ။
ဖောကျထှကျတှေးချေါ တတျတာ၊ စှနျ့ ဦးတီထှငျခငျြတာတှကေို တက်ကသိုလျ က ထိရောကျအောငျ သငျကွား မ ပေးနိုငျပါဘူး။ ဘောငျတှေ၊ စနဈတှထေဲက လာတဲ့လူ မဟုတျတဲ့အတှကျ သငျ့တှေးချေါမှုက ပိုပွီးလကျတှကေ့တြတျပါတယျ။
၇ – အနညျးငယျသာ အသုံးဝငျ
တက်ကသိုလျမှာ သငျကွားခဲ့တာတှကေို လကျတှလေု့ပျငနျးခှငျမှာ အနညျးငယျပဲ အသုံးဝငျတာကို တှရေ့မှာ ဖွဈပါတယျ။
စပ်ဆေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ လူအတော်များများ မသိသေးတဲ့ အန္တရာယ်ဆိုးကျိုးများ…!
စပ်ဆေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ လူအတော်များများ မသိသေးတဲ့ အန္တရာယ်ဆိုးကျိုးများ…! (၁) ဆေးခန်းကဝန်ထမ်းကောင်မလေးရဲ့အမေ တလောကဆုံးသွားရှာတယ်။ ဧရာဝတီတိုင်းဘက်က ရွာလေး တစ်ရွာမှာ နေတာ။ အသက် ၅၀ မာမာချာချာကြီး၊ နေ့တိုင်းလယ်ထဲကိုင်းထဲ ဆင်းအလုပ်လုပ်နေကျ။ ကိုယ်လက် တွေ ကိုက်လို့ဆိုပြီး စပ်ဆေးတွေ ဝယ်သောက်တာ ဆေးက သောက်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းသက်သာတယ်တဲ့။ မနက်တစ်ထုပ်၊ ညတစ်ထုပ် နေ့တိုင်း သောက်တယ်။ ခြောက်လလောက်ကြာတော့ တရှောင်ရှောင် ဖြစ်လာလို့ မြို့တက်ဆေးရုံပြတော့ သွေးတိုး၊ ဆီးချို၊ ကျောက်ကပ် အစုံဖြစ်နေပြီ။ မမီတော့ဘူး။ ဆုံးသွားရှာတယ်။ “အဲ့ဒီစပ်ဆေးတွေအန္တရာယ်ကို နင်မသိဘူးလားဟယ်”လို့ သူ့ကိုငေါက်မိတယ်။ “သမီးကိုလည်း ဘာမှမပြောဘူး။ ဆေးရုံတက်မှသိရတာ”တဲ့။ ဪ ပညာမတတ်၊ အသိဉာဏ်ချို့တဲ့ခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေ။ (၂) ဆေးခန်းလာပြတဲ့လူနာတစ်ယောက်။ …
This Year : 250686
Total views : 2419546